China Concrete washout bag factory sy mpamatsy | BAOTE
Ny kitapo paosin'ny paompy beton dia mety amin'ny paompy sy baomba roa. Ny habe mahazatra dia 175 * 104 * 37cm, 182 * 107 * 41cm, 110 * 110 * 49cm, 107 * 107 * 110cm, 51 * 49 * 51cm. (20 "* 20" * 19 ", 43" * 43 "* 19", 42 "* 72" * 16 ", 42" * 42 "* 43".) Amin'izao fotoana izao dia mamokatra karazana Aostraliana, karazana amerikana, kanadiana izahay. karazana kitapo paosy washout paosy, kitapo vonona afangaro, kitapo fanesorana fako ankapobeny, kitapo misy kitapo wasute nilahatra.
Inona ny fako fanariana beton? Amin'ny ankamaroan'ny toeram-panorenana dia takiana ireo mpamatsy beton ny manasa ny sakelidrany na ny pump hopper alohan'ny handaozany ilay toerana. Miorina mafy ity fako fanariam-pako ity ary sady lasa olana amin'ny tontolo iainana no manelingelina ny mpiasa amin'ny fanadiovana.
Ny ekipa BAOTE dia afaka OEM karazana kitapo Washout Concrete ho an'ny mpanjifa. Kitapo fanasana paompy beton manome vahaolana haingana sy mety hahitana ny fako fanariana beton rehetra. Ny kitapo dia apetraka eo ambanin'ny chute na hopper ary ny slurry dia ao anaty plastika / polyethylene anaty anaty kitapo.
Rehefa napetraka ny beton, dia azo forkliftable ny kitapo miaraka amina tadivavarana ho an'ny fitaterana azo antoka sy mora mankany amin'ny toerana ivelan'ny toerana. Ny kitapo rehetra dia voasedra tanteraka ary manana entana miasa azo antoka voatanisa etsy ambany.
Raha vantany vao tafapetraka, ny Kitapo Washout Concreteary ny atiny dia mamorona vokatra faharoa azo ampiasaina amin'ny rindrin'ny fijanonan'ny fiara, ny rindrina mitazona ambany na ny fitambarana voatondro. Ny kitapo dia mety tsara ampiasaina amin'ny fampiharana toy ny sivily sivily, fanamboaran-dàlana ary fanamboarana varotra
Ireo kitapo ireo dia hatolotra an-tranonkala miaraka amin'ny mpiantoka tompon'andraikitra amin'ny cranage & fametrahana & fanesorana.
Maninona no miara-miasa amin'ny TEAM BAOTE mba hamokarana kitapo Concrete Washout? Ny TEKA BAOTE dia manana traikefa famokarana kitapo fanenitra efa-taona. Afaka manome kalitao avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana ho an'ny mpanjifa izahay. Azontsika atao koa ny manome serivisy aorian'ny fivarotana tena tsara ho an'ny mpanjifa. Tongasoa eto amintsika ny fifandraisan'ny orinasa mpanala fako simenitra aminay, hanome anao antsipiriany momba ny kitapo izahay ary hanome anao tolotra tsara!
Kitapo Washout Simenitra
Kitapo Wasute Chute
Kitapo fanoloana Washout fanamboarana
Sokafy kitapo Washout
Bolts amin'ny kalesy, Bolt firafitra, U Bolts, Hex Bolts, Masinina Sodina Pipe, Lag Bolts,